Main Mafomu: Mafuta, makenduru, kirimu. Nekuda kwenzvimbo yepamusoro yekunyungudika uye huwandu hwakawanda hwemvura-inonyungudika, ichishandiswa yega kana kusanganiswa nezvimwe zvinonyungudika, iyo polyethylene glycol 1000-4000 inogona kubatsira kuwana nzvimbo yekunyunguduka apo nguva nenzvimbo yekuchengetedza zvinoenderana nezvinodiwa nemishonga uye maitiro emuviri. Iko kutsamwa kubva kuEGEG matrix suppository yakaderera pane iya kubva kuchinyakare mafuta matrix. Kurongedza Nzira: 50kg epurasitiki dhiramu Yemhando Yakajairwa: CP2015 Pasherufu Hupenyu: Thre ...
Main Mafomu: Mafuta, makenduru, kirimu. Musanganiswa wakakodzera we polyethylene glycol une kumwe kusagadzikana (senge PEG300 uye PEG1500 musanganiswa neuwandu hwakaenzana), zvivakwa izvi zvinovaita kuti vanakirwe nekunyorova kwemvura kuri nani uye kuenderana kwakanaka nemamwe madhiragi, saka inogona kushandiswa se substrate Mafuta. . Kurongedza Nzira: 50kg epurasitiki dhiramu Yemhando Yepamusoro: CP2015 Pasherufu Hupenyu: Makore matatu Kuchengetedza uye Kutakura: Ichi chigadzirwa hachisi chepfu, murazvo unodzora, seg ...
PEG600 Polyethylene Glyeol 600
Main Mafomu: Iyo molekyuru uremu hwePolyethylene glycol 600 yakakura kudarika iyo yePolyethylene glycol 400 nepo iyo huru solubility iri mumvura iri diki nekuenzanisa pakati payo. Iyo polyethylene glycol 400 imvura uye ine kuwiriraniswa kwakawanda nemanyungurusi akasiyana siyana, saka yakanaka solvent uye solubilizer uye inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa kwemvura, senge mhinduro yemumuromo, madonhwe eziso zvichingodaro. Kana oiri yemiriwo isingakodzere chinhu chinoshanda-chemutakuri zvinhu, ...
Main Mafomu: Polyethylene glycol 400 inokodzera kugadzirira iyo yakapfava capsule zvakanyanya. Iyo polyethylene glycol 400 imvura uye ine kuwiriraniswa kwakawanda nemanyungurusi akasiyana siyana, saka yakanaka solvent uye solubilizer uye inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa kwemvura, senge mhinduro yemumuromo, madonhwe eziso zvichingodaro. Kana oiri yemuriwo isingakodzere chinhu chinoshanda-chinotakura zvinhu, iyo polyethylene glycol ndiyo inotsiviwa neyekutsiva zvinhu nekuti iyo polyethylene glycol iri sta ...